China Titanium Cable orinasa sy mpanamboatra | Shuangyang
Ny tariby tariby titanium iray dia misy tariby iray sy mpampitohy fisaka iray (catch catch).
Fitsipika momba ny famolavolana
Ny henjana sy ny ranoka dia samy manana fihenjanana ambonin'ny tany na oviana na oviana. Noho izany, ny tariby titanium dia hanana tanjaka tsara sy tanjaka havizanana miaraka amin'ny fitomboan'ny kofehy.
1. Tariby iray dia vita amin'ny tariby titanium 49.
2. Sorohy tanteraka ny tadivavarana na kink toy ny tariby vy mafy.
3. Mahery, mateza ary malefaka.
4. Ny tariby dia vita amin'ny Titanium mpitsabo 5.
5. Ny mpampitohy fisaka dia vita amin'ny Titanium medaly kilasy 3.
6. Anodized ambonin'ny.
7. Fizahana MRI sy CT scan.
8. Misy famaritana isan-karazany.
Miorina amin'ny tanjona anatomika sy miasa, ny teknolojia fanamafisana ny tarika Titanium Binding System dia nampiharina tamin'ny klinika: vaky patella, vaky olecranon, vaky ny ulna proximal sy distal, vaky periprosthetic, vongan-tsiranoka sy kitrokely, valan-javaboary malleolus vaky, fery pilon, aomomioclavicular dislocation ... sns. Ireo fivakisana rehetra ireo dia miavaka amin'ny famindrana sy fihenan'ny taolana miharihary. Ny fitsaboana ireo vaky ireo dia mangataka ny mampifandanja ny tanjaky ny hozatra, fa ny sombintsombiny kely loatra ka tsy voatanan'ny implants lehibe anatiny. Noho izany, ny tariby titanium dia afaka mitana andraikitra tsy azo soloina.
Ny rafi-pamatarana titanium dia mety mitana andraikitra lehibe amin'ny tranga maro hafa, toy ny PFF, tapaka ny vatan'ny femoraly, tsy misy noho ny fikolokoloana anatiny, ny fanarenana ny lesoka taolana ary ny vaky vaky. Raha mila fepetra hafa hamboarina izy ireo, ny rafitra mamatotra titanium dia afaka mandrindra ny fametahana ao anaty mahazatra mba hahazoana fitoniana tsara kokoa.
Ny fanjaitra taolana titanium dia ilaina amin'ny vaky patella, vaky olecranon, vaky ulna akaiky sy distal, vongan-damosina ary kitrokely, sns.
Ntariby tsy misy eedle
Tariby fanjaitra mahitsy
Tariby misy fanjaitra
Teo aloha: Fanjaitra taolana
Manaraka: Flat Connector (Lock catch)
Takelaka vaky Periprosthetic